SEHO - သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းချက်သည် 90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူးထောက်ပံ့ရေး
90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူး / ကျနော်တို့ 30 ကျော်နှစ်ပေါင်းသုံးစက်တွေရောင်းများ၏ဈေးကွက်မှာမတ်တပ်ရပ်ပါပြီ။ အသုံးပြုသောစက်အပြင်, ငါတို့သည်လည်းနေဆဲတံတား Mills ကအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်ဖောက်သည်များအတွက်မတူကွဲပြားမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူကျေနပ်ဖို့ angular Mills ဌာနမှူးအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။
Home အမျိုးအစား angular Mills ဌာနမှူး 90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူး
90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူး, နယူးနှင့်တပတ်ရစ်ထောက်ပံ့ရေး 33 ကျော်နှစ်များ - SEHO
SEHO INDUSTRY CO., LTD. 1995 ကတည်းကအသစ် 90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူးတစ်ဦးပေးသွင်းသည်နှင့်ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် CNC စက်တွေ, ကြိတ်စက်နှင့်ကြိတ်အကြီးအကဲများ, နှင့်စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
S200-2 90 ဒီဂရီ Horizontal ဌာနမှူး
S200-2 90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူး
S200-2 ကြိတ်ဦးခေါင်းနှင့်အတူ, စက်တစျခုထက်ပိုစက်ညှနျကွားခရယူနိုငျသညျ, က workpiece ကျော်အလှည့်မပါဘဲဘက်-အလုပ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များပြီးအောင်ကူညီနိုငျသညျ, ကလည်းကြိတ် boring, နှိပ်, တူးဖော်ခြင်းများကဲ့သို့အခြားအလုပ်လုပ်ကိုင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပြီးသတ်ဖို့ကူညီနိုင်သည်။ အဆိုပါ 90degree ကြိတ်ဦးခေါင်းရိုးရာစက်နည်းလမ်းများ surmounts နှင့်အလုပ်သမားချွေတာရေးရရှိ, အချိန်ချွေတာခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ ... ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်သေဆုံး & မှို, အာကာသ, စွမ်းအင်, မော်တော်ကားကဲ့သို့စက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည် ...
SEHO angular ကြိတ်ဦးခေါင်းမြင့်မားသောကျောမှုနှင့်သင့်စက်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်မှအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ, သံ ချ. အရည်အသွေးမြင့် Meehanite ဖွငျ့နေကြသည်။ သင်လျော်သော angular ကြိတ်ဦးခေါင်းကိုရှေးခယျြစရာစိတ်ကူးရှိပါကရုံကိုအသင့်ရဲ့စက်လိုအပ်ချက်နှင့်အစက်အသေးစိတျသိစေ, အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များအားငါပေးမည်ပေးပါ။ ဒါ့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုရှေးခယျြဖို့အတှကျ 90degree ကြိတ်ဦးခေါင်းကို manual နဲ့ဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးအစားများရှိသည်။
အရည်အသွေးမြင့်မြေပြင်နှင့်အတူ 1. အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှဘီဗဲလ်ဂီယာလိမ်နှင့်တုန်ခါမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။
2. လွယ်ကူကိုယ်တိုင်ဖြတ်တောက်ခြင်းထောင့် (360 ဒီဂရီ) ကိုသတ်မှတ်ပါသည်။
မိုးသည်းထန်စွာရှများအတွက် 3. ခိုင်ခံ့သောခန္ဓာကိုယ်ဆောက်လုပ်ရေး။
ကွန်နက်ရှင်အနားကွပ်နှင့်အတူ 4, အ angular ခေါင်းကိုတူဗိုင်းလိပ်တံ taper စက်တွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။
ပန်းကန် DIA .: O 250
မက်စ်။ မြန်နှုန်း: 2500rpm
မက်စ်။ ရှုး DIA .: O 200
တူးဖော်: O 45
မက်စ်။ Power: 38KW
ဒေါင်လိုက် / Horizontal စက်ပစ္စည်းရေးစင်တာ / Mills စက်
နှစ်ချက်ကော်လံစက်ပစ္စည်းရေးစင်တာ / Plano Miller က
ထုပ်ပိုး: သံဖြစ်ရပ်မှန်, Dimension / အလေးချိန်: 270cm x ကို 350cm x ကို 500cm / 14kgs
S200-2 90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူး Drawing
အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှအရည်အသွေးမြင့်မြေပြင်လိမ်ဘီဗဲလ်ဂီယာနှင့်အတူ S200C-2 90 ဒီဂရီကြိတ်ဦးခေါင်းနှင့်တုန်ခါမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ထိုသို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တောက်ခြင်း angle- 360 ဒီဂရီတင်ထားရန်လွယ်ကူသည်။ ဒီဦးခေါင်း၏အားကြီးသောခန္ဓာကိုယ်ဆောက်လုပ်ရေးမိုးသည်းထန်စွာရှကောင်းမွန်သည်။ အဆိုပါ angular ဦးခေါင်းအနားကွပ်ချိတ်ဆက်ပြီးတူညီတဲ့ဗိုင်းလိပ်တံ taper စက်တွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူး
S120-250-B4 / S120-250-5
S120-250-B4 နှင့် S120-250-5 ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 90 ဒီဂရီကြိတ်ဦးခေါင်းအရည်အသွေးမြင့်မြေပြင်လိမ်ဘီဗဲလ်ဂီယာနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တုန်ခါမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ထိုသို့ 360 ဒီဂရီနှင့်အတူဖြတ်တောက်ခြင်းထောင့်တင်ထားရန်ကို manual နည်းလမ်းတစ်ခုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီဦးခေါင်း၏အားကြီးသောခန္ဓာကိုယ်ဆောက်လုပ်ရေးမိုးသည်းထန်စွာရှများအတွက်ကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြိတ်ဦးခေါင်းလည်းကွန်နက်ရှင်အနားကွပ်တွေနဲ့အတူတူပင်ဗိုင်းလိပ်တံ taper စက်တွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။
ပေါ့ပါး 90 ဒီဂရီ Mills ဌာနမှူး
SL50-B4 / SL25-5 / SL50-5
အရည်အသွေးမြင့်မြေပြင်လိမ်ဘီဗဲလ်ဂီယာနှင့်အတူ SL50-B4, SL25-5 နှင့် SL50-5 ပေါ့ပါး 90 ဒီဂရီကြိတ်ဦးခေါင်းအများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တုန်ခါမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ထိုသို့လက်စွဲလမ်းအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း angle- 360 ဒီဂရီသတ်မှတ်ထားဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီခေါင်းပေါ့ပါးဒီဇိုင်းအလတ်စားနဲ့အလင်းရှများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
SM74-B4E2, SM74-B4E3, SM74-B5E2 နှင့် SM74-B5E3 အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှအရည်အသွေးမြင့်မြေပြင်လိမ်ဘီဗဲလ်ဂီယာနှင့်အတူ 90 ဒီဂရီခေါင်းကိုပေါ့ပါးနှင့်တုန်ခါမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒါဟာအစအလွယ်တကူလက်စွဲလမ်းဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း angle- 360 ဒီဂရီသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုဦးခေါင်းအလတ်စားနဲ့အလင်းရှများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။